Maitiro / Maitiro - Potato System Magazini
Mutengesi mutsva aonekwa muRussia
Sangano reChikafu Network Enterprises rakaonekwa muRussia
Petioles uye midzi
kuru Musoro Maitiro / mafambiro
Iyo "piramidhi yemagen'a" inopa mbatatisi kurwisa kunonoka kusvibiswa
Gore rega rega, varimi vazhinji veRussia vembatatisi vanorasikirwa nechikamu chegoho ravo nekuda kwekunonoka kunonoka. Iyo inokonzera causative mumiriri wekupedzisira blight ine yakakura kwazvo geneti kusiana, iyo inobvumira kuti igare ...
Pamusika "Yaroslavl Murimi". Inobatsira uye inonaka
Ungatengesa sei zvigadzirwa zvako kupurazi diki kana vatengi vasingade kuenda kumisika nemitambo pakati pechirwere ichi? Joinha mauto ...
Kusvika pamamirioni zana nemakumi mana emaruble akarongerwa kupihwa nzvimbo dzekuvandudza dzekurima
Scientific Institutions uye mayunivhesiti eRussia anogona kuhwina anosvika mamirioni 140 rubles. kwemakore mana ekugadzira nzvimbo-yekudyara uye yekuzarira-yekuberekesa nzvimbo ...
Bazi rezvekurima rinofunga kutsigira kugadzirwa kwezvinhu zvinogadzirwa
MunaKurume, iyo State Duma inogona kufunga mukuverenga kwekutanga bhiri yezvigadzirwa zvekurima zvine hunhu hwakagadziridzwa - zvigadzirwa zve organic. Iyo State Duma munaKurume inogona ...
Nyanzvi dzinofungidzira kuwedzera munzvimbo yekushandisa zvigadzirwa zvekuchengetedza miti muRussia
Iyo nharaunda yekushandisa mishonga yekuuraya zvipuka yekambani "Nyamavhuvhu" maererano nemushonga mumwe chete yakave rekodhi. Yaisvika kumahekita mamirioni makumi mana nemasere. Panguva iyoyo ...
Ongororo yeRobotic agrochemical
Dhijitari yevhu ongororo matekinoroji anobatsira mugadziri wekurima kuti awedzere kugona kwepanyama kwekubereka kwevhu. Panguva imwecheteyo, musimboti wedhijitari matekiniki kugadzira ...
Rosselkhozbank uye "Magnit" inotsigira varimi
Rosselkhozbank nekambani yekutengesa yeMagnit dzakasaina chibvumirano chakanangana nekutsigira nekusimudzira zvigadzirwa zvemumapurazi muzvitoro. Sechikamu chemubatanidzwa ...
Azbuka Vkusa akaongorora mafashoni echikafu che2021
Yekaterina Lomakova, Mutevedzeri weMutungamiriri wezveMabhizimusi Zviitiko zveAzbuka Vkusa, akajekesa zvinogona kuitika zvekuchinja mune zvavanofarira vatengi mugore rinouya ra2021. Zvimwe zviedzo ...
Sangano reMubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose rakazivisa 2021 gore reNyika dzepasi rose reMichero neMiriwo
Secretary-General weUnited Nations, Antonio Guterres, mumashoko ake pamusoro penyaya iyi, akaona kuti michero nemiriwo zviri ...
Kuenzanisa agroecological bvunzo dzemazuva ano mbatatisi dzakasiyana siyana dzekumba nekunze kusarudzwa
Evgeny Simakov, Chief Researcher, Musoro weDhipatimendi reRuzivo rweGene Pool reMbatatisi, Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Research Center yeMatata anonzi A.G. Lorkha ", Chiremba weSainzi Sayenzi, Muzvinafundo Mumwe ...
Peji 1 pa4 1 2 ... 4 Tevere